Shiinaha Millitari Badge warshad iyo soosaarayaasha | Kingtai
Calaamadeena militariga waxaa loo sameeyay heerar isku mid ah oo mar kaliya ay dalbadeen sharci fulinta. Kibirka iyo kala soocida lasocda xirashada calaamadda aqoonsiga ee tilmaamaysa qofka muujiya calaamada ama uqaata aqoonsigiisa waa tixgalinta koowaad ee calaamad kasta oo la sameeyo.
Biinankayaga caadada ee dhinta-tuurku wuxuu leeyahay tayada 3D, kuwaas oo laga heli karo dusha dhammaadka dhalaalaya ama qadiimiga ah. ku fiican soo bandhigida sawirada cabbirka ah ee ku xirma cinjirkaaga dhabta ah.
Biinankaani waxay ku habboon yihiin xarfaha qaabka loo jaray ama loo qaabeeyey cabbir ahaan. Waxaa loo isticmaali karaa dhiirrigelinta shirkadda waxaana loo isticmaali karaa hadiyad xusuus ah oo loogu talagalay asxaabta, taas oo muujineysa qiimaha sharafta leh ee aqoonsiga muuqaalka.
Kuwani biinanka caadadii caadada waxaa lagu sameeyaa zinc alloy ama pewter oo waxaa lagu soo saaray iyada oo loo marayo habka dhalaalay. Biraha waa dareere kulul, lagu shubay caaryada, waxaana lagu abuuray wareejin.
Xiga: magnetka qaboojiyaha
Dhaldhalaalka Pin Badge